Architect ဆောက်တဲ့ တဲ ၂ | Live Life Dezine
Architect တစ်ယောက် ဆောက်ထားတဲ့ တဲလှလှလေးတစ်လုံးရှိတယ်။ ဒီစကားကို ကြားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ “ဪ..ဟုတ်လား” ပေါ့။ ပြောတဲ့ သူက ထပ်ညွှန်းတယ်။ “သက်ကယ်အုပ်၊ ရိုင်ပတ်ထားပေမယ့် Architect တစ်ယောက်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ Signature လေးတွေရှိတယ်။ အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်း “အေးပါ၊ လှမှာ ပေါ့။ ဓါတ်ပုံရှိလား” လို့ မေးတော့ကျွန်တော့်ကို ဓါတ်ပုံမပေးဘဲ လိပ်စာပဲချပေးလိုက်တယ်။ “ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိတ” နည်းနည်းတော့အံ့ဩမိတယ်။ သွားတွေ့ရမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ ရဟန်းတော်တစ်ပါး ဖြစ်နေလို့ပေါ့။
“အရှင်ဘုရား၊ တဲလေးတစ်လုံးဆောက်ထားတယ် ကြားတယ်၊ တပည့်တော်အဲဒီအကြောင်း စာရေးမျှဝေချင်လို့ပါ။”
မျက်ခုံးမွှေးတွေဖြူ သင်္ကန်းတော်ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ သက်တော်၈၀ အရွယ် ဦးဇင်းကြီးက ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာနဲ့ … ငယ်ဘ၀သံဖြူလုပ်ရင်းShape တွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှာ စန္ဒရားပြင်ရင်းကြိုးညှိရင်း၂၀ ကျပ်တန်ကျောင်းလခကို ၇ ကျပ်နဲ့ဈေးဆစ်ပြီး စာသင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကစပြီး နက်နဲတဲ့ သချာင်္ပညာနဲ့ ဂျီဩမေတြီဆိုင် ရာပုံစံတွေ ဆက်စပ်တွက်ချက်မှုပညာတွေကို စိတ်စေတနာပါစွာနဲ့ရှင်းပြရင်းနိဒါန်းပျိုးလိုက်တယ်။
သူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တဲကလေးရဲ့ အခြေခံသီအိုရီဟာ Platonic Solid ဆိုတဲ့ ရှေးခေတ်ဂျီဩမေတြီပညာမှာ မြစ်ဖျားခံတဲ့ အကြောင်းကို ကို ယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ စက္ကူ Model လေးတွေပြရင်းအသေအချာရှင်းပြနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့သံချေးတက်နေတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ သချာင်္အပိုင်းကို အတင်းလှုပ်နှိုးရင်းရသလောက်ကို ဖမ်းဆုပ်မှတ်သားနေရ တယ်။ ဂျက်အင်ဂျင်ဘေးပြေးလိုက်ရတဲ့ နွားလှည်းလိုပဲ ကတုန်းကတိုက်နဲ့ အတင်းလိုက်ခဲ့ရတယ်။ စိတ်စေတနာပါတဲ့ ရှင်းပြသံတွေ၊ ပုံစံငယ်လေးတွေ၊ တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အဆောက်အဦဓာတ်ပုံတွေကြားမှာ လူပြိန်းတစ်ယောက်သိမြင်သင့်သလောက် သိမြင်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သေသေချာချာသိမြင်ခဲ့ရတာ တော့ဦးဇင်းဦးပဏ္ဍိတ(ခ)ဦးဘိုကြီးဟာ အလွန်တော်တဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်၊ သူမတူတဲ့ ကို ယ်ပိုင်ဟန်ပြည့်ဝတဲ့ Architect တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပါပဲ။
ကျွန်တော့် နွားလှည်းဦးနှောက်လေး အရှိန်စရလာတဲ့ အချိန်မှာ ဦးဇင်းကြီးက သူ့ဂျက်အင်ဂျင်ကို ဂီယာချိန်းလိုက်တယ်။ “Geodesic dome” တဲ့ ။ ဪ Architect တစ်ယောက် တဲတစ်လုံးဆောက်ဖို့ စဉ်းစားပုံများ အခြေခံသီအိုရီတွေ၊ အခြေခံ Shape / Form တွေနဲ့၊ ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွေးမိတယ်။ Geodesic dome Shaped Structure တစ်ခုရဲ့ အကျိုးအပြစ်တွေ သမိုင်းတလျှောက်က Geodesic dome အကြောင်းတွေ၊ သူရဲ့ Shape နဲ့ဂျီဩမေတြီ သချာင်္နည်းပညာဆက်စပ်ပုံတွေကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သဘောပေါက်လာတာ က Geodesic dome တစ်ခု ဒီဇိုင်းဆွဲချင်ရင် ၊ တည်ဆောက်ချင်ရင် ၊ Diameter(အချင်း)ကို သိရုံနဲ့ အသင့်တပ်ဆင်လို့ရတဲ့ precast သဘောမျိုး module လေးတွေကို တွက်ချက်ထုတ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာ သိ လာတယ်။ Platonic Solid လို့ခေါ်တဲ့ အနားညီပုံစံတွေရဲ့ သဘောကို အခြေခံပြီး အဆင့်ဆင့်ဆက်လိုက်တဲ့ အခါ ကို ယ်ရည်ရွယ် တဲ့ အချင်း Diameter ရှိတဲ့ Geodesic dome တွေ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီလိုနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို ကျွန်တော်အရိပ်အမြွတ် သိလောက်ပြီး ပြီဆိုတော့ မှ “ဒကာကြီး ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ ဦးဇင်း သိတယ်” ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံ Album တွေထုတ်လာပြတယ် ….
ပထမဦးဆုံးဆောက်ခဲ့တဲ့ တော ရကျောင်းဆောင် တဲကလေး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ထားဝယ်အင်းကျေးရွာအနီး၊ နတ်စမ်းတော ရမှာ ဝါကပ်ရင်းတော ရကျောင်းလေးဆောက်ခဲ့တယ်။ တစ် ပါးစံကျောင်းဆောင်လေးကို ဝါးလုံးတွေနဲ့ Geodesic dome Structure ဆောက်တယ်။ တစ်ပါးစံကျောင်းဆောင်လေးကို လေးပေအရှည် အချောင်းတွေနဲ့ ငါးပေအရှည်အချောင်းတွေဖြတ်ပြီး သချာFနည်းနဲ့ ဘယ်အချောင်းနဲ့ ဘယ်အချောင်းဆက်ရမယ်။ ကြက်ခြေခတ်ရမယ်ဆိုတာ တွက်ချက်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Geodesic dome ပုံစံပေါ်အောင် ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဝါးခုတ် ၃ ရက်ကို ထည့်တွက်ရင် တော င် နှစ်ပတ်ပဲကြာတယ်။ အနီးဆုံးရွာနဲ့ နှစ်မိုင်ဝေးတဲ့ တော ရစခန်းမှာ ဆောက်တယ်ဆိုပေမယ့် လူနေအဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေ လုံလောက်သောအလင်းနှင့် လေဝင်လေထွက်မှုကို ကောင်းမွန်စေမယ့် ပြတင်းပေါက်တွေအပြင် Roof Vent လေးတစ်ခုကို ပါ ခေါင်းမိုးမှာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
PVC ပိုက်များဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်း
အဲဒီနောက်မှာ တော့ဝါးလုံးနေရာမှာ ၂ လက်မ PVC ပိုက်တွေအစားထိုးပြီး Geodesic dome Structure ရအောင် စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ သိခဲ့ရတာ က PVC ပိုက်နဲ့လုပ်ကို င်ရတာ ပိုတိကျပြီး တပ်ဆင်ရပိုလွယ်တယ်ဆိုတာ ရယ်၊ Geodesic dome တစ်ခုကို ခေါင်မိုးကနေဆောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ရယ်ပေါ့။ တစ်ပါးစံတော ရတဲကျောင်းလေးဆိုပေမယ့်လည်း Aesthetic value (အမြင်ပသာဒတန်ဖိုး) ကို မလျှော့ချဘဲ တဲအခြေ အဝိုင်းက ဝါးလုံးတွေကို အမည်းရောင်ဆေးသုတ်၊ Geodesic dome Structure ရဲ့ ဝါးလုံးတွေကို အနီရောင်၊ (နီညိုရောင်) ဆေး သုတ်ပြီး ပီပီသသလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Architect ရဲ့ တဲ
၂၀၀၇ ခုနှစ်ရောက်တော့နွေရာသီပူလို့ ရှမ်းပြည်၊ ကလော၊ အောင်ပန်းဘက်မှာ ခဏသွားနေတုန်း၊ ချွေးမဖြစ်သူက အကြံဥာဏ်တော င်းလာတယ်။ သူမဝယ်ထားတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေပေါ်မှာ လူနေအိမ်ဆောက်ခွင့်မရှိလို့ လယ်တဲလေးဆောက်ချင်တဲ့ အကြောင်း ခြံမြေတစ်ခုလုံးကို ၃၆၀ ဒီဂရီ စီးပြီး မြင်ရတဲ့ နေရာမှာ တည်ချင်တဲ့ အကြောင်းပြော လာတယ်။
အဲဒါနဲ့ ဦးဇင်းကငါလုပ်ပေးမယ်။ ငါ့ကို PVC ပိုက်တွေသာဝယ်ပေးဆိုပြီး ကောက်ရိုးပုံကြီးလုပ်ရအောင်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ လုပ်ကို င်ချင်တဲ့ အိမ်ပုံစံကို စဉ်းစားပြီး PVC ပိုက်တွေကို တွက်ချက်ဝယ်ယူတယ်။ ၁၉ ပေရှည်တဲ့ ၂ လက်မပိုက် ၃၃ ချောင်းကို ဝယ်ပြီး တွက်ချက်ထားတဲ့ အတိုင်း ဖြတ်တော က်ရတယ်။
ကုန်းထိပ်မှာ တည်တာ ဆိုတော့၂၅ ပေအချင်းရဲ့ အစွန်းရောက်ရင် မြေကြီးကနေ ၆ ပေ လောက်ကွာနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ အုတ်နဲ့ပတ်ရံပြီး နံရံဆောက်ရတယ်။ ပြီး တော့ အထဲက မြေကြီးတွေက တူးထုတ်ပြီး Basement ပါ တစ်ခါတည်းဆောက်လိုက်ရော။ အရင် dome ကို Support လုပ်မယ့် အဲဒီနံရံပေါ်မှာ မှ ကြမ်းပြင်တည်ပြီး တခါတည်း Decking ကို ပါ လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီး တော့ မှ PVC ပိုက်တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ Geodesic dome Structure ကြီးကို တင်ပြီး တဲအိမ်ဆောက်လိုက်တယ်။ သက်ကယ်မိုးတွေတင်လိုက်တဲ့ အခါကြတော့ အဝေးကကြည့်လိုက်ရင် ကောက်ရိုးပုံကြီးနဲ့တူသွားတာ ပေါ့။နောက်ဆုံးမှာ တော့ကုန်းထိပ်မှာ တည်ထားတာ ဆိုတော့မိုးကြိုးလွှဲတပ်လိုက်တယ်။ အဲဒါအားလုံးထဲမှာ ဈေးအကြီးဆုံးပဲ။ မိုးကြိုးလွှဲက တစ်သိန်းခွဲတော င်ပေးရတယ်။
ဦးဇင်းကြီးကဓာတ်ပုံတွေလက်နဲ့ထောက်ထောက်ပြီး ဒီလိုရှင်းပြလေတော့ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီတဲလေးမွေးဖွားတည်ဆောက်ပုံကို မြတ်နိုးလေးစားမိတယ်။ ပညာရှင်ဆိုတာ ဒီလိုလူမျိုးပါလားလို့ အထင်ကြီးတန်ဖိုးထားမိတယ်။ တတ်သိကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဟာ သာမန်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးကို တော င် ပညာဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး လုပ်ကို င်တတ်ပါလားဆိုတဲ့ အသိရရှိလာခဲ့တယ်။
ခဏနေတော့ဦးဇင်းကြီးကရယ်စရာပြောပြတယ်။ နတ်စမ်းတော ရမှာ တစ်ပါးစံတဲကျောင်းလေးဆောက်တော့ရွာနီးချုပ်စပ်က ကူညီတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့စပ်စုတဲ့ သူတွေည်းရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့သူတို့ကို ဒီနည်း (Geodesic dome တွက်နည်း) သင်ချင်လားလို့မေးတော့အားလုံးက ဝမ်းပမ်းတသာနဲ့ သင်ချင်ပါတယ်လို့ဖြေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘယ်လောက်အရွယ်အစားကို တွက်ချင်တာ လဲလို့ ဆိုတော့ရွာသားတွေက “၉ လက်မ၊ ၁၀ လက်မအရွယ်လောက်ပါဘုရား” လို့ဖြေတယ်။ ဦးဇင်းကြီးလည်း အံ့ဩလို့ ဘာအတွက်တုန်းလို့မိန့်တော့သူတို့က နတ်အုန်း ဆွဲခြင်းလေးတွေ လုပ်ရောင်းမလို့ပါဘုရားလို့ ဖြေကြတယ်။ ဦးဇင်းကြီးလည်း သေ ရောလို့ပဲ ပြန်ပြောနိုင်တယ်တဲ့ ။
ဦးဇင်းဦးပဏ္ဍိတ ပြောတဲ့ စကားတွေထဲက မှတ်သားဖွယ်တစ်ချို့ကို ဝေမျှရင်းနဲ့နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိတ (ခ) ဦးဘိုကြီး
မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၉၃၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ဇာတိ
မိဘ – ဦးဩဘာ + ဒေါ်စောတင်
မိဘအလုပ်အကို င် – ဖခင် – သံဖြူဆရာ၊ စန္ဒရားပြင်ဆရာ၊ ဆိုင်းဘုတ်ရေးဆရာ
မိခင် – ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းရောင်းသူ
အခြေခံပညာရေး – ၁၉၃၈ – ၁၉၄၂ ၊ ဒေါ်ဟန်ကျောင်း
၁၉၄၆ – ၁၉၅၃ – Saint Albert’s Missionary High School (ပြင်ဦးလွင်မြို့)
ကောလိပ် – ၁၉၅၅ – မန္တလေးဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံကောလိပ်မှ ဥပစာသိပ္ပံတန်းကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်၊
တက္ကသိုလ်ပညာရေး – ရန်ကုန် BOC ကောလိပ်သို့တက်ရောက်၊ ၁၉၅၉ BSc.. Eng. (Architecture) ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိ။
– ကျောင်းနေစဉ်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်အတွက် Recreation Center ကို ဆောက်လုပ်ရန် ဆရာဖြစ်သူ Mr. Oswald Nagler ၏ တာ ဝန်ပေးချက်အရ Detail drawing ထုတ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးစီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်၍ ပထမခြေလှမ်းစတင်။
– RASU အတွက် Recreation Center ဆောက်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း မြန်မာပြည်၏ ပထမဦးဆုံး Architecture ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည့် သန်လျင် BOC အတွက် “ သူနာပြုဆေးပေးခန်း အဆောက်အဦဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်၊ ဦးဘိုကြီးနှင့် ဦးဖေဝင်းတို့ ပူးပေါင်းယှဉ်ပြိုင်သောဒီဇိုင်းဖြင့် ပထမဆုဆွတ်ခူးရရှိ။
– ၁၉၆၂ တွင် ဦးတင်ထွန်း၊ ဦးအောင်ကြီးမြင့်တို့နှင့်အတူ (Architects Incorporated) firm ကို ထူထောင်
– BPI အတွက်အဆောက်အဦများဒီဇိုင်း
– မေမြို့ Town Authority အတွက် လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင် ဒီဇိုင်း
– မေမြို့ မြို့တော်ခန်းမနှင့်ရင် ပြင် ဒီဇိုင်း
– ကုန်သည်အသင်းအတွက် ပန်းဆိုးတန်း ပြည်သူ့ဆိုင် ဒီဇိုင်း
– လမ်း ၅၀ ရှိ ကုန်သည်အသင်းရုံးဒီဇိုင်း
– ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းရှိ ကျားကူးကျောင်းတိုက်သိမ်ဒီဇိုင်း
– မြေနီကုန်းနှင့် ဦးဝိစာရရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်များ ဒီဇိုင်း
– ဈေးကလေးအိမ်ယာစီမံကိန်း (တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာ)
– Ritz နှင့် Palladium စသောရုပ်ရှင်ရုံများ၏ Renovation ဒီဇိုင်း
စသည်စသည်ဖြင့် Archi firm အနေဖြင့်လုပ်ကို င်ခဲ့သည်။
– ၁၉၆၅ တွင် နိုင်ငံတော်မှကုမ္ပဏီနှင့်လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းသည့်အခါ အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ် အိုးအိမ်နှင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွင် တာ ဝန်ထမ်းဆောင်။
– ၁၉၈၈ တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မဟာ သီရိသုဓမ္မဒေါ်ခင်ကြည် ဆုံးပါးသွားသောအခါ အုတ်ဂူဒီဇိုင်း ပြုလုပ်၊ ကို ယ်တိုင်ဘိလပ်မြေနှင့် သန်လျက်ကို င်၊ ဂူပိတ်သည် အထိဆောင်ရွက်ပေးခဲ့။
– ၁၉၉၀ တွင်အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ အနားယူ။
– သိမ်ကြီးဈေး Dရုံ ဆောက်လုပ်သောအခါ “Myanmar Land International” ကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းသည့်အလုပ်ကို လက်ခံ။ သိမ်ကြီးဈေး Dရုံ၏ ခေါင်မိုးတွင် Semi Capsule-shaped transparent skylight အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်၊ ကို ယ်တိုင်ကြီးကြပ်လုပ်ကို င်။
– မဟာ ဗန္ဓုလလမ်းရှိ သိမ်တော်ကြီး နာရီစင်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်။ ပထမဆုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရ။ ဦးဘိုကြီး၏ဒီဇိုင်းအတိုင်း ဆောက်လုပ်တည်ရှိ။
– ၂၀၀၃ တွင် သာသနာ့ဘောင်ဝင်၊ ရဟန်းအဖြစ်ခံယူ။
– ၂၀၀၆ တွင် စစ်ကို င်းဝါးချက်ကျေးရွာ ပတ္တမြားစေတီတော င်ခြေတွင်ဝါကပ်ရင်းတစ်ပါးစံကျောင်းဆောင်အဖြစ် ဝါး၊ သက်ကယ်တို့ကို အသုံးပြု၍ Geodesic dome ပုံစံတဲငယ် ဒီဇိုင်းဆွဲဆောက်လုပ်။
– ၂၀၀၇ တွင် အောင်ပန်းမြို့ရှိ ဥယျာဉ်ခြံမြေအလယ်တွင် PVC ပိုက်များဖြင့် Geodesic dome Shape အိမ်တည်ဆောက်။
– ၂၀၀၈ တွင် UN.Habitat အတွက် Geodesic dome Shape အိမ်ပုံစံနှင့် ဆောက်လုပ်နည်းလှူဒါန်း။
← Architect ဆောက်တဲ့ တဲ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိူး (သို့မဟုတ်) Architecture ပညာရပ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း →